Heshiiska kirada - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Guri kiro > Heshiiska kirada
Marka aad Finland guri ka kireysanayso, markasta samee heshiiska kirada oo qoraal ah. Heshiishka waxaa ku jira tusaale ahaan kirada bisha, dibaajiga kirada iyo sida heshiiska kirada loo joojin karo.
Heshiiska kiradu waa ahaan karaa
Mid shaqeynaya ilaa intii la rabo
Mid waqti caddadan.
Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus waxaa uu jirayaa inta uu kireeyaha ama kireystahu uu heshiiska ka noqonayo. Haddaadan horey u ogeyn, mudadda aad dagenaaneyso guriga heshiiskaas ayaa ah midka kugu habboon.
Määräaikainen vuokrasopimus waxaa loola jeedaa, in kireystaha iyo kireeyaha ay ku heshiiyaan markiiba, goorta heshiisku ku eg yahay. Xiliga heshiiska kiraduna wuxuu ku eg yahay taariikhda markaa lagu heshiiyey, iyadoon u baahneyn wax heshiis kabax kale. Haddii aad rabto inaad sii degenaato gurigii waxaad u baahan tahay heshiis kiro cusub.
Heshiiska waqtiga caddadan kama bixi kartid xiligaas aad ku heshiiseen ee heshiiskuna shaqeynayo. Taasina waa mid ah iney dhowraan kireeyaha iyo laga kireeyahaba. Haddaad markaas og tahay waqti ciyam inaad u baahan tahay guri, heshiiskaas waqtiga caddadan ayaa ah midka kugu habboon.
Ijaarka guriga waa inaad bishii mar bixisaa. Ijaarkana waa inaad ku bixisaa waqtiga lagu heshiiyey ugu danbeyn. Waqtiguna wuxuu ku qoran yahay heshiiska guriga. Ku bixi ijaarka akoonka meesha ku qoran. Ijaarka kuma bixin kartid kaar kareedhid ah.
Markaad galeyso heshiis kiro guri Finland , had iyo goor waxaa la bixiyaa lacag carbuun kirada ah. Taasoo loola jeedo inaad siineyso kireeyaha guriga lacag carbuun ah, taasoo u dhiginta dhowr billood kirada ijaarka gurig,a taasoo inta baddan u dhiganta 2 billood kirada guriga, ama ugu badnaan 3 billood kiradood.
U shub kireeyaha guriga lacagta carbuunta guriga ugu danbeyn maalintaad kula heshiisey ee ku qoran heshiiska guriga. Inta baddan waxa furaha guriga heleysaa markii aad bixiso lacagta carbuunta guriga.
Markuu dhamaado heshiiskii guriga, guriga ayaa lagaa koontorooli markaasna waxaa laguu soo celin lacagtii carbuuntoo dhan, haddii
aad guriga waxyeeleyn ood daryeeshey
ood bixisey dhammaan ijaarkii, taasood kula heshiisey kireeyaha guriga.
Haddii aad wax ka jabisey guriga ama aadan bixin ijaarkii oo dhan, markaa heli meysid lacagtii carbuuntoo dhan.
Carbuunta guriga uma isticmaali kartid ijaarka guriga bilaha ugu danbeeya.
U heyso ijaarka kadib lacag kharashaadka kale.
Guryaha inta badan waxaa la bixiyaa kharash biyo. Ugu shub kireeyaha ama shirkada guriga kharashka biyaha akoonkooda markaad bixineyso ijaarka. Kharashka biyuhu waxay ku xiran yihiin inta qof ee degan guriga. Haddii gurigu ku yaalo mitirka biyaha, kharashka biyuhu waxay ku xiran yihiin hadba inta aad isticmaashey.
Heshiiska korontada guriga adiga ayaa soo galaya. Waxaanad heshiiska ku geli kartaa markaad wacdo shirkada korontada ood u sheegto magacaaga iyo ciiwaankaaga cusub. Waxaad is barbardhigi kartaa qiimayaasha, haddii aad hesho shirkad jaban.
Haddii gurigu uu leeyahay hiitarka ka dhexeeya guriga inta badan waxay ku jirtaa kirada. Haddii gurigu yahay hiitarkiisa mid ku shaqeeya olyada ama uu yahay mid koronto ku shaqeeya, waa inaad gooni u bixisaa.
Sawnada, qasaalada iyo baarkinka baabuurta
Haddii aad rabto inaad isticmaasho shirkada sawnadeeda, qasaaladeeda iyo baarkinkaba inta badan waa lacag. Kharashaadkaasna waxaa loo shubaa toos shirkada guryaha.
Kharashka guryaha filada
Haddii aad ku degan tahay kiro guri filo ah, inta badan adiga ayaa bixinaya kharashka hiitarka iyo qaadista qashinka.
Ka bixista heshiiska kirada
Waqtiga ka bixista heshiiska kirada waxaa laga wadaa, inta weli heshiisku sii socdo kadib markii laga baxo heshiiska. Ka bixista heshiiska kirada waxay khuseysaa heshiiska ah intii la doono.
Kireystaha inta uu heshiiska kaga bixi karo waa muddo bil kalendar kahor ah. Ogow oo maanka ku hay, sida ka bixitaanka heshiiska kirada loo xisaabinayo. Sida badan heshiis ka bixista kiradu waxay bilaabanaysaa kadib marka ay dhamaato bishaas la rabo in heshiiska laga baxo. Haddii aad rabto inaad guriga heshiiskiisa ka baxdo 1.12. waa inaad wargelisaa heshiis ka baxaaga 31.10 haddii kale waxaad bixineysaa bisha 12'aad ijaarkeeda.
Ka samee qoraal heshiis ka bixistaada. Waa shardi inaad heysato caddeyn, inaad u sameysey kireeyaha guriga wargelin inaad ka baxeyso heshiiski.
Kiireyaha guriga xiliga heshiis ka bixistiisa waxay ku xiran tahay hadba. Inta aad ijaarka ugu jirtey. Haddii heshiiskaagu ahaa sanad ka yar. Hashiis ka bixista waa inuu sameysaa saddex billood kahor. haddii heshiiska ahaa sanad ka baddan. Heshiis ka bixista waa inuu sameeyaa lix billood kahor.
Heshiiska mudadda cayiman inta heshiisku jiro kama bixi kartid heshiiskii kirada.
Sii kireynta guriga
Sii kireynta waxaa laga wadaa markii kireystihii guriga uu ka sii kireeyo qeyb ruux kale. Kireystuhu waa yeeli karaa sidaas, haduusan wax dhib ah u arag kireeyihii hore laga kireystey guriga. Intaadan u guurin laga sii kareeye ahaan, iska xaqiiji marka hore kaa kireeyaha inuu xaq u leeyahay, inuu sii kireyn karo qeyb guriga. Sidoo kale laga sii kireeye waad u ahaan kartaa kireeyaha asalka guriga, markaad qeyb keliya ka kireysato kireeyaha guriguna dhinac ka dagen yahay.
Laga sii kireeyaha guriga waqtiga uu heshiiska kaga baxayo waxay ka yar tahay kireystaha caadiga.
Kasii kireeye guriga
Kasii kireeye waxaa laga wadaa markii laga kireeyaha guriga uu gebi kasii kireeyo kireyste kale gurigii oo dhan. Taasna waxaa loo baahan yahay inuu ogolaansho ka heysto kireeyihii guriga ka kireeyey isaga. Ka bixista heshiiskuna wuxuu noqonayaa sida ka bixista heshiiska caadiga mid la mida.
Sambalo ah heshiiska ijaarkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Hagaha habka ijaarka wanaagsan(pdf, 546 kB)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Carabi
Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan guri kireysashada ka aqri
Bogga Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha waxaa ku jira macluumaad ku saabsan, xuquuqda iyo waajibaadka aad guri kireyste ahaan u leedahay Finland.
Bogga Guri kiro waxaad ka heleysaa macluumaadka ay kamidka yihiin sida loo helo guri kira ah.
Bogga Deganaanshaha Finland waxaa ku jira macluumaad ku saabsan qiimaha guryaha la kireystoe e Finland.